MadaxweyneTrump oo muuqaal uu kaga hadlayo xaaladdiisa caafimaad kasoo dhex diray isbitaalka – Calanka.com
MadaxweyneTrump oo muuqaal uu kaga hadlayo xaaladdiisa caafimaad kasoo dhex diray isbitaalka
in Dibedda — by admin —	October 4, 2020
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo uu hayo xanuunka COVID19 ayaa xalay sii daayay muuqaal cusub oo uu kasoo duubay Isbitaalka uu kujiro, kaasoo uu ku sheegay inuu dareemayo inuu soo fiicnaanayo islamarkaana uu rajeynayo inuu dhaqso kusoo bagsoodo.
Muuqaal afar daqiiqo ah oo dadka uu kula hadlay ayuu ku sheegay inuusan fiicneyn markii la dhigayay isbitaalka Walter Reed ee duleedka Washington, kadib baaritaankii la masriiyay Jimcihii ee looga helay xanuunka.
Laakiin waxuu sheegay inuu aad u fiican yahay hadda islamarkaana ay si adag uga shaqeynayaan inuu dib usoo kabto, isagoo intaasi ku daray inaysan garaneynin sida uu xaalka noqon doono maalmaha soo socda oo uu sheegay inay mari doonaan tijaabada dhabta ah.
Trump codkiisa ayaa laga dareemayay waxoogaa daal ah intii muuqaalka uu socday, laakiin wuxaa ka muuqday niyad wanaag waxuuna sheegay inuu u dagaallamayo malaayiin dad oo dunida daafaheeda ku nool kuwaas oo la ildaran Virus-ka, isagoo intaasi ku daray inay ka adkaan doonaan cudurka COVID19.
Madaxweynaha ayaa u mahad celiyay dhaqaatiirta iyo kalkaaliyeyaasha caafimaadka ee isaga daweyntiisa ku howolan, dadweynaha Mareykanka iyo hogaamiyeyaasha caalamka ee usoo diray farriimaha ay wanaagga iyo caafimaadka ugu rajeynayeen.
Xanuunka COVID-19 ee ku dhacay madaxweyne Trump ayaa imanaya, muddo bil ah ka hor inta aysan dhicin doorashada madaxtinimada Mareykanka ee 3-da November.
PARIS: Kumannaan usoo dibed-baxay macallinkii loo bireeyay sawir-gacmeedka nabi Muxammad (NNKH)
Xabbad-joojinta dagaalka Armenia iyo Azerbijian oo mar kale la jabiyay
Maxkamadda HAGUE oo dadaal ugu jirta sidii Cumar al-Bashiir loogu soo gacan-gelin lahaa
Turkiga oo tijaabiyay gantaalladii uu kasoo iibsaday Ruushka
ICC prosecutor arrives in Sudan to discuss Bashir case
The International Criminal Court’s prosecutor arrived in Sudan late Saturday to discuss cooperation with local authorities over bringing to trial[Read More…]
VIDEO: Tyson oo tababarihiisa feer miisaan leh la helay xilli la aalamiinteynayay
VIDEO: Bahal dilaa ah oo hurdo ka kiciyay nin jiifa – daawo hab-dhaqankiisa
VIDEO: Daawo daanyeer taleefoon xaday, dabadeedna iska soo duubay muuqaallo layaab leh